Ikhosi yeziSeko zoLwazi lweDatha (IDE) ngesaphulelo se-50% -iGeofumadas
Ikhaya/Ukufundisa i-CAD / GIS/I-Course kwi-Infatistructures Data (IDE) ngeSaphulelo se-50%
Ukufundisa i-CAD / GISGeospatial - GIS
I-Course kwi-Infatistructures Data (IDE) ngeSaphulelo se-50%
Ukusuka Uqeqesho lweQela le-DMSInkampani ekhethekileyo ekuqeqesheni i-e-learning enxulumene ne-IDE, i-GIS, ubuchule bezomthetho, iicartography, ikhathalogu, imethadatha, iinkonzo zokubona, uhlahlo-lwabiwo mali, imilinganiselo kunye nokuqinisekiswa kwindawo. Sifuna ukukuthumela ukukhuthaza okukhethekileyo enxulumene noqeqesho lwakho.
Le Khosi yeziSeko zoLwazi ngeSpatial (IDE), ngesaphulelo se-50% kwabo babhalise phakathi koMvulo 26 kunye noLwesithathu 28 nge-Matshi ye-2012.
Umthetho kulwakhiwo kunye neenkonzo zolwazi lunyanzelisa ukuba sisebenze ngendlela elungelelanisiweyo kwaye sisebenzisane ukufezekisa upapasho oluhambelanayo lwedatha evelisiweyo. Oku kuthetha ukuphuhliswa kweZakhiwo zeDatha yeZakhiwo (i-SDI) esekwe kumgaqo olandelwayo kunye nokubalulwa, kuthatha inkqubela phambili yetekhnoloji kunye nefuthe, elinxulumene nokupapashwa kwedatha kwi-Intanethi.
Ngokugqiba le khosi unokuqeqesha kwaye ukhusele imfuno ekhoyo kweli sebe lolwazi lwendawo, exhaswa yimiyalelo yaseYurophu, imithetho yelizwe kunye nezivumelwano zeziko.
Ukuziphathaukufunda nge-e-X (iiyure ze-60)
Ubhaliso: kuphela ukusukela namhlanje kude kube NgoLwesithathu 28 Uya kuba nethuba lokuxhamla koku ukukhuthaza okukhethekileyo. Yenza ubhaliso
Kule khosi uya kufunda:
Ezona mpawu ziphambili ze-IDE
Imigaqo eqhelekileyo yokusekwa kwayo
Ngaba bubuphi ubukho be-IDE ebandakanyekayo
Injani imeko yalo teknoloji?
Imigangatho kunye neprofayili yemethadatha
Iinkonzo zeJografi: I-WMS, WFS, WFS-G, WCS, CSW
Abathengi bokukhanya kunye nabaxumi abasindayo
Ke ukuba sele uthathe isigqibo sokuba uyakuyithatha i-IDE, eli lithuba elingahlawulelwayo. Yenza ubhaliso ngoku
Ukuba ufunda le ntengiso kwaye ikhosi ayisasifumani, kuya kufuneka ubhalisele kwiinethiwekhi zazo ukuze wazi iikhosi ezintsha.
Ngasemva kwesandla sakho